Qala kabusha imodyuli ye-Bluetooth ye-Mac yakho uma unezinkinga zokuxhuma | Ngivela kwa-mac
Qala kabusha imodyuli yakho ye-Bluetooth ye-Mac uma unezinkinga zokuxhumeka
Kungenzeka ukuthi unamadivayisi amaningana axhunywe kwi-Bluetooth nsuku zonke, ungahle ungakhumbuli, ngoba uwaxhume okokuqala, futhi awazange adale izinkinga kusukela lapho. Sikhuluma ngamakhibhodi, amagundane, ama-trackpads noma izipikha, phakathi kwabanye. Kepha Uma beqala ukuba nenkinga yokuxhuma, okungenzeki kwi-Mac, ungahle udinge ukusetha kabusha imodyuli ye-Bluetooth.
Ngaphambi kokwenza lesi sinyathelo, sincoma ukuthi ucishe i-peripheral exhunyiwe, kuze kube seqophelweni lokususa ugesi, kungaba amandla kagesi noma izinsika, uphinde uyivule futhi ukuze uqinisekise ukumataniswa kwayo. Uma ingakulungisi, landela lezi zinyathelo.
Ngaphambilini, khumbula ukuthi ikhibhodi ye-iMac noma iMac mini ingaxhunywa nge-Bluetooth, kanye negundane noma iTrackpad. Ngakho-ke, kuzofanela ungene esikhundleni salezi zingxenye, kulokhu ngokuxhumeka kwentambo, ngoba ngesikhathi sokuqalisa kabusha bazobe bengaxhunyiwe ku-inthanethi. Uma ukubonile lokhu, usukulungele ukuqala kabusha.
Okokuqala, uphawu lwe-Bluetooth kufanele luvele kubha yemenyu. Uma ungenayo, ukuyincenga kufanele wenze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Iya ku Izintandokazi zesistimu.
Ewindini le-pop-up, chofoza inketho evela ezansi: Khombisa i-Bluetooth kubha yemenyu. Uphawu lwe-Bluetooth manje selufanele lubonakale kubha yomsebenzi.
Ngemuva kwalokho kufanele buza imenyu ye-Bluetooth efihliwe. Ngokucindezelwa okhiye be-Shift ne-Option (alt), khetha uphawu lwe-Bluetooth kubha yemenyu.
Dedela okhiye uzobona imenyu efihliwe.
Finyelela inketho Ukulungisa iphutha.
Khetha inketho Setha kabusha imojuli ye-Bluetooth.
Ekugcineni, qala kabusha iMac yakho.
Uma sekuqaliswe kabusha, noma yiziphi izinkinga zokuxhumana phakathi kwamadivayisi bekufanele zixazululwe.
Imenyu yokususa iphutha inezinye izinketho ezimbili esizoxoxa ngazo manje: Setha kabusha izilungiselelo zasembonini kuwo wonke amadivayisi we-Apple axhunyiwe. Kulokhu, sicela ubuyisele zonke izesekeli ze-Apple kuzilungiselelo zefektri. Kuyindlela ethokozisayo, uma ngabe wenze izinyathelo zangaphambilini ngaphandle kwempumelelo.
Ekugcineni, Susa wonke amadivayisi, Kuyasiza lapho sifuna ukususa ukuxhumanisa wonke amadivayisi, ngenxa yezinkinga zokuxhuma noma ukuwaxhumanisa nenye iMac eseduze futhi sigweme ukuphazanyiswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Qala kabusha imodyuli yakho ye-Bluetooth ye-Mac uma unezinkinga zokuxhumeka
Ikhibhodi ayisebenzi kimi, uma igundane. Ngingayithola kanjani imenyu yokulungisa iphutha uma ngikwazi ukuthayipha (i-alt-option) eduze kuka (Meyi)?
U-Elena Fdez. kusho
Futhi uma inketho ye-Bluetooth inyamalale kuphaneli yezintandokazi ????
Phendula u-Elena Fdez.
U-Andres Saldarriaga kusho
Imac yami ivele ingasebenzi i-bluetooth futhi ngezikhathi ezithile ngosuku… uyazi ukuthi kungani lokho kwenzeka?
Phendula u-Andrés Saldarriaga
I-Bluetooth ayitholakali ivele kimi, kepha ayingikhombisi inketho yokulungisa iphutha ngesinqamuleli, ngabe ikhona enye indlela?
UNorbey Felipe Lopez Avila kusho
Sawubona mngani, bakunike imininingwane ngesisombululo sale nkinga? lokho kwenzeka nakimi.
Phendula uNorbey Felipe Lopez Avila
ULuis Sanda kusho
Sawubona, ithi iBluetooth ayitholakali, kepha ayingikhombisi inketho yokulungisa iphutha, ingabe ikhona enye indlela? Ngiyabonga
Phendula uLuis Sanda
Kuthiwani uma i-Apple ingalethi imikhiqizo yehardware ngoMashi 27?
Manje sesingasebenzisa i-Apple Pay ukugcina iModeli 3 yethu